Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment कपल च्यालेञ्जमा अपलोड भएका फोटोहरु पो'र्न साइटमा ! - Pnpkhabar.com
कपल च्यालेञ्जमा अपलोड भएका फोटोहरु पो’र्न साइटमा !
काठमाडौं : केही समय अघिसम्म सामाजिक सञ्जालमा चलेको कपल च्यालेञ्ज अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले अपलोड गरेका आफ्नो पार्टनरसँगको फोटो विभिन्न पो’र्न साइटमा देखिन थालेका छन् ।
कपल च्यालेञ्जमा अपलोड गरिएका विशेष गरी सेलिब्रेटी जोडीहरुको केही फोटो पो’र्न साइटहरुमा अपलोड भएको भेटिन थालेको समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । आफ्नो पार्टनरसँगको फोटो ह्यासट्याग कपल च्यालेञ्ज सहित फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्वीटरमा पोस्ट गरिरहेकाहरु सतर्क रहने बेला आएको सुरक्षा अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
यो ह्यासट्याग मात्र नभएर ह्याकरले व्यक्तिगत जानकारी संकलन गर्न बुनेको जाल भएको साइबर सुरक्षा विज्ञहरुको विश्लेषण छ । सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेका ह्यासट्याग ट्रेन्डमा आफ्नो तस्वीर तथा निजी जानकारी पोस्ट गर्नु अरुका लागि च्यालेञ्ज नभएर आफ्नै जीवनमाथिको च्यालेञ्जको रुपमा आइलाग्न सक्ने तर्फ विज्ञहरुले सचेत गराएका छन् ।
यो ट्रेन्ड नेपालमा मात्र नभएर अहिले छिमेकी देश भारत, बंग्लादेश लगायतका मुलुकमा पनि खुबै चलेको छ । अहिलेसम्म करिब ३० लाख प्रयोगकर्ताले कपल च्यालेञ्जको रुपमा आफ्ना पार्टनरसँगको फोटो फेसबुकमा शेयर गरिसकेका छन् । भारतको पुणे प्र’हरीले त आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलमार्फत प्रयोगकर्ताहरुलाई यो च्यालेञ्जबाट जोगिन अनुरोध गरेको छ ।
यस प्रकारका च्यालेञ्ज चलाएर ह्याकरले प्रयोगकर्ताका निजी तस्वीरहरुलाई निशाना बनाउँछन् । जसलाई विश्वभर रिभेञ्ज पोर्न तथा डिप फेक प्रविधिको शिकार बनाइने विज्ञहरु बताउछन् । कयौं व्यक्तिहरु, खास गरेर महिलाहरु डिप फेकको शिकार हुने गरेका छन् । जसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर कसैको तस्वीर अर्को कुनै व्यक्तिको शरीरमा यसरी जोडिन्छ कि त्यो वास्तविक जस्तै देखिन थाल्छ ।
आम सर्वसाधारणदेखि ठूला सेलिब्रेटी समेत यस किसिमका डिप फेकका शिकार भइसकेका छन् । केही दिनको अन्तरालमा सामाजिक सञ्जालमा फरक फरक किसिमका च्यालेञ्जहरु आइरहेका छन् । यस्तैमा आएका च्यालेञ्ज मध्ये कपल च्यालेञ्ज पनि एक हो ।
कपल च्यालेञ्जमा सहभागी केही व्यक्तिको फोटो पोर्नग्राफिक साइटहरुमा देखिएका खबर आउन थालेका छन् । विज्ञहरुका अनुसार डिप फेक बाहेक यस किसिमका च्यालेञ्जबाट व्यक्तिका सम्पूर्ण निजी जानकारी निकालिन्छ । त्यसैको आधारमा ब्ल्याकमेल समेत हुनसक्ने ख’तरा रहन्छ ।